Thayipha 1 no-Type 2 Diabetes: Okujwayelekile nokungafani > Ukuxilonga
Thayipha 1 no-Type 2 Diabetes: Okujwayelekile nokungafani
Uhlobo 1 no-2 sikashukela yizifo ezihluke ngokuphelele, kodwa futhi zinezimpawu ezivamile. Phakathi kwazo, uphawu oluphambili, ngenxa yalokho lokhu kugula kwathola igama - ushukela wegazi ophezulu. Zombili lezi zifo zinzima, ushintsho luthinta zonke izitho nezinqubo zesiguli. Ngemuva kokuxilongwa, impilo yomuntu iguquka ngokuphelele. Yini ejwayelekile futhi yini umehluko phakathi kwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2?
Uyini umnyombo wazo zombili lezi zifo nezimbangela zazo eziphambili
Okujwayelekile kuzo zombili lezi zifo i-hyperglycemia, okungukuthi, izinga elikhudlwana le-glucose egazini, kepha izimbangela zalo zihlukile.
Uhlobo lwe-1 isifo sikashukela senzeka ngenxa yokuqedwa kokukhiqizwa kwe-insulin yethu, edlulisa i-glucose kwizicubu, ngakho-ke, iyaqhubeka nokujikeleza ngokweqile. Imbangela yalesi sifo ayikaziwa.
Uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 luba kubantu abakhuluphele kakhulu, izicubu zabo ezingasayiphathi i-insulin, kepha ngasikhathi sinye ikhiqiza ngokwanele. Ngakho-ke, isizathu esiyinhloko ukungondleki kanye nokukhuluphala.
Kuzona zozimbili lezi zinhlobo, ifa lidlala indima ebalulekile ekwakhiweni kwezifo.
Ukuvezwa kohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2
Uhlobo 1 nesifo sikashukela se-2 sinezimpawu zomtholampilo ezivamile, ezinjengokomela, umlomo owomile, ukuchama ngokweqile, kanye nobuthakathaka. Kodwa-ke, ngalinye lazo linokuphawuleka kwalo.
Uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela luvela ngaphambi kweminyaka yobudala engama-30, amacala okuqala kwalesi sifo ezinganeni ezineminyaka engama-5-7 azijwayelekile. Iqala ngokunamandla, imvamisa ngezibonakaliso zesifo se-ketoacisode noma ngisho nesifo sikashukela. Kusukela emavikini okuqala okugula, umuntu wehlisa isisindo kakhulu, aphuze uketshezi oluningi, uzizwe kabi, anganuka i-acetone emoyeni okhipha umoya. Isiguli esinjalo sidinga ukunakekelwa okuphuthumayo.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sinokuthambekela okuvunyelwe kakhulu iminyaka eminingana. Abantu abanjalo bavame ukuba nenani elikhulu lezicubu ze-adipose, okucasulayo lesi sifo. Izikhalazo ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ziyefana, kodwa ukubonakaliswa kwalesi sifo akukhulunyelwa ngakho futhi kuthuthuka kancane kancane. Kwesinye isikhathi ukuxilongwa kungenziwa kuphela uma kutholakala izinga eliphakeme likashukela, ngaphandle kwezimpawu ezithile.
Ukuxilonga zombili izinhlobo zesifo sikashukela
Zombili lezi zinhlobo zikashukela zibonakala ngokwanda kokuzila okusheshayo kwegazi likashukela ngaphezulu kwe-6.1 mmol / L egazini kusuka ngomunwe nangaphezulu kuka-7.0 mmol / L egazini le-venous. Umphumela wokuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose ungaphezulu kwe-11.1 mmol / L. Kepha ngesifo sikashukela sohlobo 1, amazinga kashukela angaba phezulu kakhulu, ikakhulukazi ngaphambi kokuqala ukwelashwa kwe-insulin (40 mmol / L noma ngaphezulu). Futhi, kuzo zombili izinhlobo zesifo sikashukela, ushukela kanye ne-acetone kungavela kumchamo futhi izinga le-hemoglobin ye-glycated liphakeme kune-6.5%.
Ukwelashwa kohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2
Ukwelashwa kwalezi zifo kuhlukile ngokuyisisekelo. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 1, okuwukuphela kwendlela yokwelapha ukuphatha i-insulin evela ngaphandle ngomjovo. Ukwelashwa kuyinto yansuku zonke nokuphila konke. Ngokuphathelene nesifo sikashukela sohlobo 2, amaqhinga awodwa: ezinye iziguli zingalungisa kuphela i-hyperglycemia ngokudla, othile uboniswa amaphilisi anciphisa ushukela, ezimweni ezinzima, iziguli zithola ukwelashwa okuhlanganiswayo ngamathebulethi nokulungiselela kwe-insulin.